Baarlamaanka Galmudug oo ka dooday sharciga shaqaalaha (Sawiro) – Radio Daljir
Baarlamaanka Galmudug oo ka dooday sharciga shaqaalaha (Sawiro)
Juunyo 29, 2021 2:32 g 0
Baarlamaanka Galmudug oo ku jira shaqa maalmeedkiisa ayaa maanta Wasaaradda Shaqada iyo Arimaha Bulshada Galmudug waxa ay hor gaysay Sharciga Shaqaalaha Guud iyo Shaqaalaha Galmudug si loo meel mariyo sharcigaan.
Kulanka oo ahaa Kalfadhiga 2-aad kulankiisa 18-aad waxaa shir guddoominayay Guddoomiyaha Baarlamaamka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal iyo Ku-xigeenadiisa .
Ajandaha kulanka Baarlamaanka Galmudug ayaa wuxuu ahaa Akhrinta 2aad ee Hindise Sharciyeedka Nidaaminta iyo Naqshadeynta Magaalooyinka, Bandhigga iyo Akhrinta 1aad ee Hindise Sharciyeedka Shaqaalaha guud iyo Shaqaalaha Rayidka iyo Isla-Xisaabtanka Golaha ee Waqtiga kulamada iyo fasaxyada sida uu kulanka ku furay Guddoomiye Gacal.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arimaha Bulshada Galmudug Mudane Yaxye Xiish oo Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug horgeeyay sharciga shaqaalaha ayaa xildhibaannada u sharaxay faa’idada sharcigaan u leeyahay xuquuqda Shaqaalaha Galmudug.
Sidoo kale Xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug ayaa ka dooday Sharciga Nidaaminta iyo Naqshadeynta magaalooyinka sharcigan oo ay soo gudbisay Wasaaradda Howlaha Guud, Guryeynta iyo Dib-u-dhiska Galmudug ayaa Guddiga Howlaha Guud iyo Guryeynta Baarlamaanka ayaa Xildhibaannada horkeenay Qodobadii dib usixidda lagu sameeyeen.
Waraysi: Maxaa u qorshaysan guddoomiyaha cusub ee loo doortay degmada Jariiban? (Daawo)